Momba anay - Ningbo Madacus Printing Co., Ltd.
Ningbo Madacus Print Co., Ltd. dia manolotra serivisy fanaovana pirinty sy fonosana mifaninana mandritra ny 20 taona mahery, mifantoka amin'ny fanontana boky, magazine, kahie ary boaty fonosana izahay, miaraka amin'ny fitakiana tena lehibe, nifankahita hatrany izahay ary nihoatra ny takian'ny mpanjifa aza.
Madacus Print manana fivarotana fanaovana pirinty voaomana tsara, ny fitaovana fanontana any Alemana Heidelberg mandroso indrindra ary ny fomba fanao henjana QC. Nandany ny fanaraha-maso ny FSC sy ny BSCI izahay. ary manome hatrany ny serivisy fanontana sy fonosana tokana tsara sy mahomby ary fandefasana haingana manerantany.
Tsipika famokarana mekanika mandroso, Fomba fanao QC henjana, Famokarana sary an-tsary maimaimpoana
Mifanaraka amin'ny filôzôfia momba ny "fampandrosoana entin'ny fahaiza-mamorona" ary manana fitaovana famokarana maoderina tonga lafatra sy fitaovana fanampiana. Mampahafantatra indrindra ny Heidelberg XL75-8F vaovao izahay, XL75-6 + LF quarto 6 + 1 Pirinty fanontana, super Master CD102-4Preset Plus, ny mpivarotra loko Xiaosen G40-5 miloko milina fanontam-pirinty 4. Avy amin'ny famolavolana, fanaovana takelaka, fanontana, fanaovan-tsolika, lamination, famonoana maty, famokarana tsipika famokarana tokana.
Manoloana ny vanim-potoana miovaova amin'ny fampandrosoana ara-tsiansa sy ara-teknolojia, eo am-panolorana hatrany ireo fitaovana sy teknolojia mandroso, ny orinasanay dia nampiditra talenta fitantanana avo lenta sy mpiasa matihanina sy ara-teknika, miorina amin'ny Shanghai, miatrika an'izao tontolo izao, manitatra mavitrika ny iraisam-pirenena, ny anatiny Ny tsena dia mahatratra toe-javatra mandresy miaraka amin'ireo mpanjifa manana kalitao faran'izay tsara, serivisy tsara indrindra ary vidiny mirary indrindra. Ny fanoloran-tena sy ny matihanina no tetezana misy antsika sy ny mpanjifanay!
Hanome ny tolotra voalohany izahay, ny fandefasana ara-potoana, ny kalitao tsara, ny vidin'ny fifaninanana dia ny foto-kevitry ny serivisinay. Manantena izahay fa hisy fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao, azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.